Maitiro ekupa ongororo yakanyorwa | Kuumbwa uye kudzidza
Maitiro ekupa ongororo yakanyorwa
Kupikiswa 2.0 | | Mapurojekiti ekutsvagisa, Maitiro ekudzidza, Zvirongwa zvekushora
Kamwe iyo data yakawanikwa yaunganidzwa, yakasarudzwa uye yakarongedzwa nenzira yakarongeka, inouya chikamu chekuratidzira, kungave kwakanyorwa kana kwemuromo fomu rekutsvaga. Basa rekuronga mazano rinogona kutsanangurwa kuburikidza nekuwedzeredzwa kwemadigiramu uye inotevera kusimudzira ajenda. Basa rekugadzira zvinyorwa rinotsanangurwa kuburikidza nekuvakwa kwemavara akagadzirwa zvakanaka. Iyi misoro inobatwa nayo mukunyora kwekukakavara.
Tevere, hunyanzvi hwehunyanzvi (index, bhuku rebhaibheri, zvinyorwa, zvinyorwa) zvichaunzwa izvo zvinoenderana nekusiyanisa yakanyorwa meseji yekutsvaga kubva kune mamwe marudzi ezvinyorwa.
Kana hurukuro yakanyorwa yakati rebei, mutemo wakanaka kuti igovaniswe muzvitsauko zvakati wandei. Izvo zvakakodzera kuti chitsauko chimwe nechimwe chibate nediki-dambudziko uye, sezvazvinogona, kuzvitonga kubva kune zvimwe zvitsauko. Kupatsanurwa kwechinyorwa muzvikamu kunobatsira chete pamanyoro akareba kwazvo, zvinodikanwa kuti izvi zvive zvakasununguka, nepo zvichidikanwa kudzivirira kupatsanurwa kwechinyorwa zvakanyatsotsanangurwa sekutungamira kuzvikamu zvakapfupika kana zvidimbu.
Kana iko kutsvagurudza kukakamurwa kuita zvitsauko, zvakakodzera kupa indekisi iyo inofanirwa kunge iine runyorwa rwezvitsauko nezvikamu zvinogoneka, zvine chiratidzo chemapeji anoenderana echinyorwa. Kazhinji indekisi inoonekwa papeji yechipiri yezvakanyorwa.
Bhuku rebhaibheri runyorwa rwezvinyorwa zvese zvakanyorwa zvinoshandiswa mundima yekutsvaga. Inowanzo kurairwa nearufabheti, zvinoenderana nezita remunyori werimwe gwaro rinoshandiswa.
Mharidzo yekuferefeta ndechimwe chinhu chega chinofanirwa kutevedzera, nekuti ichi ndicho chigumo chekupedzisira chebasa rakakura uye nesimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Mapurojekiti ekutsvagisa » Maitiro ekupa ongororo yakanyorwa
nel hapana chakanaka mer nuck
q pex ne syu icdt, iwe
Kukosha kweEkutanga Dzidzo Yevacheche